isivumelwano: ipad pro 9.7 32gb ingaphantsi kwe- $ 500 kwi-ebay, imodeli yeverizon ibiza i- $ 480 ngesivumelwano
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-iPad Pro 9.7 32GB ingaphantsi kwe- $ 500 kwi-eBay, imodeli yeVerizon ibiza i- $ 480 ngesivumelwano
Idili: I-iPad Pro 9.7 32GB ingaphantsi kwe- $ 500 kwi-eBay, imodeli yeVerizon ibiza i- $ 480 ngesivumelwano
Iimveliso zeApple & apos kunqabile ukuba zixhamle kwizaphulelo ezinkulu emva konyaka nje omnye zifumaneke kwintengiso. Nangona kunjalo, ukuba awunakukwazi ukufikelela kunyaka ophelileyo i-iPad Pro 9.7, nantsi intengiselwano eya kukuvumela ukuba uyithenge ngaphandle kokuqhekeza ibhanki.
Ewe, ubuncinci akukho bhanki inkulu kuba ithebhulethi isabiza kakhulu. Umthengisi omnye we-eBay uthengisa IPad Pro 9.7 32GB iWi-Fi + LTE Imodeli ye- $ 499.99 nje, nangona ithebhulethi ihlala ifumaneka nge $ 730.
Abathengi abathatha isigqibo sokuya kwintengiselwano baya kugcina i-230 yeedola xa bethenga i-iPad Pro 9.7, efumaneka eRose, eRose Gold, kwiSilivere, naseGrey Space.
Ukuba usenakho & apos; awukwazi ukufikelela kwiApple & apos; s IPad Pro 9.7 32GB , emva koko unokucinga ngeyona ntengiso iphezulu yokuthenga. Umthengisi waseMelika uthengisa imodeli efanayo nge- $ 479.99 nje, kodwa kuya kufuneka uzibophelele kwisivumelwano seminyaka emi-2 kunye neVerizon. Kwicala elisezantsi, wena & apos; uya kugcina imali engaphantsi kwe- $ 250 xa uthenga iVerizon iPad Pro 9.7 32GB.
Ezi zivumelwano ziyafumaneka okwexeshana okanye kude kube kugqityiwe ukubonelelwa, ke thabatha isigqibo ngokukhawuleza malunga nokuba uza kuzisebenzisa na okanye hayi.
IPad Pro 9.7-intshi
Iintengiso zekhadi lesipho le-iphone 7
Elona nqaku libalaseleyo lokukhusela isikrini
Imoto g5 kunye nezivumelwano zangoLwesihlanu omnyama
Yile nto indlela ye-iPhone 13 Portrait yevidiyo enokubonakala ngayo
Imicimbi ene-LG G4 yokuthinta isikrini ikhusela iitephu ezikhawulezayo kunye nokuchukumisa ekubhaliseni kwiscreen
Utshintshile ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iOS kwiveki ephelileyo; nantsi into endiyifumeneyo ukuza kuthi ga ngoku
Uyifaka njani iJMeter ngeePlagi ezongezelelweyo kwiMac OS usebenzisa iKhayaBrew
Uyifumana njani iApple Arcade yasimahla ngoku kunye nendlela yokurhoxisa isilingo sasimahla
Izicwangciso zesprint zokuthenga isikhokelo: zeziphi & zeziphi ezona zicwangciso zibalaseleyo zeSprint kuwe?
I-AT & T ineyona ntengiso yasimahla yeGPS S20, fumana i-S20 Ultra nge $ 400
I-Facebook ikhabe abasebenzisi be-Apple iPhone kwiiakhawunti zabo ngolwe-Sihlanu
Insiza ivumela abasebenzisi be-Samsung Galaxy Qaphela i-9 ukuba baphinde baphinde basebenzise iqhosha le-Bixby
Imifanekiso yamatyala e-5G Pixel 6 kunye nePixel 6 Pro yokuhanjiswa kweefowuni ezintsha